श्रीमद्भागवत महापुराण नेपालीमा (पाँचौ अध्याय) « Pariwartan Khabar
३१ असार २०७६, मङ्गलबार
श्रीमद्भागवत महापुराण नेपालीमा (पाँचौ अध्याय)
।। श्रीगणेशाय नमः ।।
कीर्तनको महिमा र नारदको पूर्वचरित्र
दिक्क भएर बसेका व्यासलाई हातमा वीणा लिएका नारदले नजिकै आएर भने- हे पराशरपुत्र के भयो ? तिमी मन, शरीर वा आफूसँग सन्तुष्ट छैनौ ? सबै अर्थले सम्पन्न, महान् अद्भुत महाभारत रचना गरेर तिम्रो इच्छा पूरा भयो होला । सनातन ब्रह्मको जिज्ञासा र त्यसको अध्ययन ग¥यौ र पनि अकृतार्थ झैँ खिन्न देखिन्छौ ।
मेरा विषयमा तिमीले भनेको सत्य हो । मेरो आत्मा सन्तुष्ट छैन । तिमी अगाध आत्मज्ञानले सम्पन्न छौ र आत्मभूत पनि हौ । त्यसैले तिमीलाई नै सोध्छु । उनै उपास्य पुराणपुरुष, परावरेश, संसारको सृष्टि, पालन र नाश गर्ने, गुणबाट तटस्थ भगवान्को तिमीले सबै गोप्यता जानेका छौ । तिमी सूर्यझैँ तीनै लोक घुम्दै अन्तःकरणमा विचरण गर्ने वायुझैँ आत्माका साक्षी हौ । धर्मपूर्वक नियमद्वारा परावर ब्रह्ममा स्नान गरेकाले मेरो कमजोरी जे छ त्यसलाई राम्ररी भन- व्यासले भने ।
भगवान्का पवित्र गाथाको सबै बयान नगर्दा तिमीलाई आत्मसन्तुष्टि भएन । तिमीले धर्म, अर्थको निरुपण गरेको सरी वासुदेवको महिमा वर्णन गरेनौ । हरिको यशोगान नभएका विचित्र कुराले संसार पवित्र गर्दैन । मानसतीर्थमा फोहोरी काग होइन, हंस विचरण गर्छन् । मानिसको पाप नाश गर्ने अनन्तको नाम सज्जनले सुन्छन्, गाउँछन् र कीर्तन गर्दछन् । अच्युतप्रति भाव नभएमा पवित्र र निरञ्जन ज्ञान पनि शोभित हुँदैन । कारण रहित भई कर्मलाई शाश्वत ईश्वरमा अर्पित नगरी सफल भइन्न । तिमी अमोघ दृष्टि, पवित्रकीर्ति, सत्यमा चल्ने हौ । समाधिका नियममा बसेर बन्धनबाट मुक्त गर्ने उरुक्रमलाई स्मरण गर । अन्य रुप, नाम, दृष्टिको बयान गरेर बुद्धि स्थिर हुँदैन । हावाले हानेको नौका जस्तो हुनेछौ । धर्मका नाममा अन्य अनुरक्ति बढ्यो भने ठूलो गल्ती गर्नेछौ । आफूले धर्म हो भन्ने ठानेको वाक्यलाई छोड्नु हुँदैन भन्दै विशिष्ट ज्ञानी बुद्धिमान्हरु व्यापक, अनन्त, अपार भगवान्को नामबाट विमुख भएर सुख पाउँछन् । सत्वादि गुणमा रम्ने देहाभिमानीहरुका निम्ति अब परमात्माको लीला बयान गर । हरिका चरणकमलको भजन स्वधर्म हो । त्यसलाई त्यागेर पतन भइयो भने अहित हुन्छ ।
स्वधर्मले आप्तको नियम पालन गर्दा नै असल हुन्छ भनी बुद्धिमान्ले त्यसका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसमै रमाउँदा पनि केही पाइएन वा दुःखसुख जे पाइयो त्यो सर्वथा कालको प्रभाव हो । मुकुन्दको सेवा गर्ने मानिस अरु जस्तो संसारचक्रमा कसै गरे पनि पर्दैन । एकपटक मुकुन्दका चरणमा समर्पित भएका रसग्राहीले फेरि त्यसलाई छोड्न सक्तैन । भगवान्बाहेक जगत्को स्थिति भएका ठाउँमा निषेधको सम्भावना हुन्छ । आफूलाई परमात्माको कलाका रुप हौ भन्ने अचुक दृष्टिले हेर्नुपर्छ । संसारको हित गर्न अजन्मा नै भए पनि जन्मिन पाएको महाभाग्यशाली हुँ भनी मान्नुपर्छ । यही मानिसका तपस्याको, ज्ञानको, सज्जनताको वा महान् लक्ष्यको फल हो । यही वा बुद्धिले दिएको अकाट्य अर्थ हो र। उत्तमश्लोकका गुणको वर्णन पनि त्यही नै हो भन्ने ज्ञानीहरुले ठम्याएका छन् ।
म पूर्वजन्ममा वेदप्रचारककी दासीको छोरो थिएँ । बालकमै योगीहरुबाट चातुर्मासको कथा मैले सुनेको थिएँ । चञ्चल नभई, खेल्ने उफ्रने नगरी म धीर रहन्थेँ । चुप लागेर सुनिरहने हुनाले ममाथि ती समदर्शीहरुले कृपा गरे । द्विजहरुका अनुमतिले भाँडामा टाँसिएको, उभ्रेको एक छाक खाँदै त्यसैबाट म मेरो पूर्व जन्मको पाप मेटाउने गर्दथेँ । त्यसरी नै मेरो चित्त पवित्र हुँदै गयो र धर्ममा रुचि उत्पन्न भयो । उनीहरुकै कृपाले मैले कृष्णका सुन्दर कथाहरु सुनेँ । कथाका प्रत्येक पद श्रद्धाले सुन्दा सुन्दै मभित्र अखण्ड भक्ति उत्पन्न भयो । रुचि भइसकेपछि मेरो बुद्धि नै प्रियश्रव कृष्णतर्फ ढल्कियो । अहिले मनमा कल्पित सत् र असत् जगत्लाई म परब्रह्म स्वरुप मान्छु । वर्षा र शरद् ऋतुमा हरिको पवित्र यश सावधानीपूर्वक महात्माहरुसँग बसेर सुनेकाले रज र तमोगुण नाश भई मभित्र भक्ति जाग्यो । त्यसरी अनुरक्त र श्रद्धालु म बालक अनुचरसँग साक्षात् भगवान्ले दिएर गएको गोप्य ज्ञान छ भनी ती कृपालु दीनवत्सलहरु बताउँथे । मैले भगवान् वासुदेवको माया एवं त्यसको प्रभाव जानेँ । परम पद त्यसैबाट पाइन्छ ।
तीन ताप विनाश गर्ने उनै ईश्वरमा कर्महरु अर्पण गर्नुपर्छ भनी मैले तिमीलाई बताएँ । प्राणीलाई रोगी बनाउनेलाई नै चिकित्साले निर्मूल गर्दा रोगको औषधि हुन्छ । मनुष्यका यस्ता कर्मको योग सबै जन्ममृत्युको कारण हो । त्यो भगवान्मा अर्पण गर्दा कर्मभाव मेटिन्छ । भगवान्लाई सन्तुष्ट गर्न यहाँ गरिने कर्महरुकै अधीनमा ज्ञान, भक्ति र योग समन्वित हुन्छन् । भगवान्का आदेशमा कर्म गरी नाम, गुणको गायनसँगै कृष्णको स्मरण गर्नुपर्दछ । भगवान् वासुदेव भनी ध्यान गर्छु । प्रद्युम्न, अनिरुद्ध र सङ्कर्षणलाई नमस्कार छ । मन्त्र स्वरुपका मूर्तिहीन यज्ञपुरुषलाई उचित दृष्टि भएका मानिसले राम्ररी ध्यान गर्दछन् । यो मैले गरेको स्वचिन्तनकै कारण मलाई केशवले आफ्नो ज्ञान, ऐश्वर्य र भाव पनि दिए । तिमीले आर्जन गरेका विभुका अनन्त ज्ञानहरुबाट जिज्ञासुको मन शान्त हुन्छ । मन दुःखमा पिल्सिएका मानिसहरु यसरी नै कष्टबाट मुक्त हुन्छन्, अर्को कुनै उपाय छैन भनी नारदले आफ्नो वृत्तान्त सुनाए ।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे पञ्चमोऽध्यायः ।।५।।
नेपाललाई डुबाउन भारतले बनाएको कोशी बाँधको लुकेको इतिहास
३० असार २०७६, काठमाडौं नेपाली जनताहरुको लागि धेरै राम्रो काम गरेको थिए भनिन्छ–राजा महेन्द्र वीर
नेपाली युवती पुगिन् ‘मिस इंग्ल्याण्ड’ को फाइनलमा
३० असार २०७६, काठमाडौँ हङकङमा जन्मिएकी २६ वर्षीया प्रतिष्ठा बेलायतस्थित शडवरीमा बस्दै आएकी छिन् ।
आदिवासी जनजाति महासंघले निकाल्यो सुनसरीमा राँके जुलुस
३० अषाढ २०७६, काठमाडौं लोकसेवा आयोगले विभिन्न जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको लागि दिदैँ आएको
भ्यागुताको विहेका कारण वर्षा बढी भएको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद
३० अषाढ २०७६, काठमाडौं पानी नपरेको कारण भ्यागुताको विहे गराईदिएका मोरङवासीहरुले भ्यागुताको सम्बन्ध विच्छेद गराइदिएका
श्रीदेवीको निधन भएको डेढ बर्षपछि खुल्यो डरलाग्दो रहस्य, श्रीदेवीको निधन नभई हत्या भएको थियो
अन्ततः छविले स्वीकारे आफ्नो गल्ती, भन्छन् : ‘अब शिल्पाकै काखमा मर्छु’
घरेलु कामदार घर आउन वञ्चित: पुनः श्रमस्वीकृतिको निर्देशन माग्दै सरकार
महन्तले बेचे अर्बौं रुपैयाँ पर्ने मठमन्दिरको जग्गा
लिबियाबाट फर्केकाहरूले भने– ’अध्यागमनकै सेटिङमा उडेका थियौं’
सर्लाहीमा उदारका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी नै सम्पर्कविहिन
विवेकको क्यानभासः जहाँ, दुनियाँ पोतिन्छन् ।